ITIL: Ọdịiche dị n'etiti nchịkwa akụkọ na njikwa nsogbu
Olee otú ITIL si edozi nsogbu na nsogbu
Kedu ihe mebiri na ITIL?
Kedu ihe bụ nsogbu na ITIL?
Kedu ihe bụ Mmekọahụ na Nsogbu na ITIL?
Gịnị mere ITIL ji dị iche n'etiti nsogbu na nsogbu?
ITIL Ọzụzụ & Asambodo
KeduITIL dị iche iche nsogbu na ihe ọghọm
Nyocha n'okpuru akwụkwọ ọmụmụ ITIL® Foundation na-echekarị na ule ya ga-ekewapụ ọnọdụ na nsogbu. Iji dozie nsogbu a ma nye ìhè, blog a ga-amata ọdịiche dị n'etiti ọnọdụ na nsogbu, otu esi ejikọta ha, na ihe kpatara ya ji eme ihe dị iche.
Dị ka ITIL na-egosi, ihe merenụ bụ ịbịanye aka na ọrụ ma ọ bụ ịda mbà na ụdị ọrụ. Ihe na-emekarị mkpebi nke ihe dịka ihe merenụ bụ ma agbanyeghị ọgbụgba nkwekọrịta ọrụ (SLA). Mee nke ahụ, ITIL na-eche echiche ịmepụta ihe ọbụlagodi tupu a kụjie SLA ka ọ ghara ịbanye na mkpochi ma ọ bụ chee na ọ ga-emetụta ya.
N'okwu nke nwoke, ihe merenụ bụ ihe ngosi nke nhichapụ.
Dị ka ITIL gosiri, nsogbu bụ isi iyi nke ọ dịkarịa ala otu ngosipụta. Enwere ike ibute nsogbu site na ma ọ dịkarịa ala otu ọnọdụ, ma ọ bụ ha nwere ike ịzụlite n'enweghị ọnụnọ nke ihe atụ.
N'okwu nke onye ụkọ, nsogbu bụ nkọwa nke ihe kpatara ma ọ bụ ihe kpatara ya ma ọbụ ma ọ dịkarịa ala otu blackouts.
Dị ka a na-achị, njikọ dị n'etiti abụọ ahụ bụ na otu nsogbu bụ ihe kpatara ọ dịkarịa ala otu ọnọdụ. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ dị iche iche inwe ihe (ma ọ bụ nchịkọta nke ngosipụta) nke ihe karịrị otu nsogbu kpatara.
Ebumnuche nke ịmara ọnọdụ na nsogbu bụ otu ihe ahụ dị iche iche na ọnọdụ na njedebe. Nsogbu bụ ihe kpatara, na ngosipụta bụ mmetụta.
ITIL na-agba ndị mmekọ ume ka ha mata ihe ndị a n'ihi eziokwu ahụ bụ na a na-emeso ha abụọ ma mee ha n'ụzọ a na-atụghị anya ya. Ịga na ihe merenụ pụtara n'ụzọ doro anya na ọrụ ọ bụla ọ bụla emetụtara emetụbeghị aka. Ọ pụtaghị na ihe ahụ agaghị eme ngwa ngwa ma ọ bụ mgbe e mesịrị. Mgbe m na-ekwu "na mberede," cheta na nke ahụ nwere ike ịpụta otu oge ma ọ bụ afọ 10. Eziokwu nke okwu a bụ na mkpebi siri ike maka ihe omume agaghị agbanwe agbanwe.
Nsogbu, n'ọnọdụ ọ bụla, bụ ihe kpatara ya. Anyị nwere ike iji usoro pụrụ iche chọpụta isi iyi nke nsogbu ma mezie nsogbu ahụ. N'okwu ahụ mgbe mkpebi siri ike, ọ na-eme ka njikwa mgbanwe dakwasị na eziokwu nke na ịchọta isi mgbọrọgwụ na-agụnyekarị ihe ize ndụ.
Njikwa ihe omume dị ike na-ekwenye na dịka onye na-ebu sistemụ ọrụ ị nwere ike ịmebe ikikere ị mere na SLA gị site na ịnye usoro iji melite ọrụ ozugbo mgbe ọ dị mkpa. Nchịkọta nsogbu na-emesi obi ike na dịka onye na-ebu sistemụ ọrụ ị nwere ike ịzaghachi omume na ihe mgbaru ọsọ na ha anaghị emeghachi ma jiri nlezianya mee ka ngosipụta malite ime.
Ndị a bụ usoro dị iche iche ebe ọ bụ na ha na-achọ mgbe niile ịzụta ihe dịgasị iche iche ma gosipụta ya. Ọchịchị na-eme ka ọ dị mkpa iji melite ọrụ na-arụ ọrụ ọ bụla dịka ọ bụla SLA na-eguzobe ọ bụ ezie na njikwa nsogbu kwesịrị igbu ndị isi mmalite nke usoro. N'ọnọdụ ụfọdụ iji lezie anya nsogbu a, onye na-ahụ maka ọrụ ga-eweta ma ọ bụ gbasaa ọhụụ ugbu a.
Ndị nyocha na-eji usoro nlekọta nsogbu na atụmatụ dị iche iche maka ebe ha na-arụ ọrụ na ebe anyị na-arụ ọrụ na nhazi usoro nsogbu anyị. Nkwenye a na-emeghị ka ọ bụrụ ndị na-amụ ihe, ha ga-achọpụta ihe ndị ha chọrọ iji nweta akwụkwọ ITIL.
ITIL Nkwado Ọrụ & Analysis
Gịnị mere PMP Asambodo ji dị mkpa maka Project Manager?